Azụ na-edozi Peptide Factory - China Fish Collagen Peptide Manufacturers, Suppliers
Ekwentị: +86898 66553777
Azụ Collagen Peptide
Koodu Azụ Collagen Peptide
Mmiri Azụ Oligopeptide
Tilapia Azụ Collagen Peptide
Okpokoro kukumba Peptide
Cod Fish collagen Peptide bụ ụdị m collagen peptide.It sitere na akpụkpọ azụ azụ, nke enzymatic hydrolysis na-arụ ọrụ na obere okpomọkụ, A na-ejikarị ya na nri, nlekọta ahụ ike, ọgwụ na ụlọ ọrụ ntecha.
Mmiri azụ oligopeptide bụ ngwaahịa miri emi nke miri emi, na-enwe uru pụrụ iche na nri na ngwa. Ihe ka ọtụtụ n’ime ha bụ obere peptide a gwakọtara agwakọta mejupụtara 26 amino acid nwere ịdị arọ nke 500-1000dalton. Ọ nwere ike etinye obi gị dum na obere eriri afọ, anụ ahụ mmadụ, wdg. Ọ nwere ike ekwukwa n'akwụkwọ e ji mara na mbara ngwa.
Hainan Huayan Collagen Technology Co., Ltd na-emepụta tọn 4,000 nke pelopi peptide dị elu nke dị elu kwa afọ, collagen azụ (peptide) bụ usoro enzymatic hydrolysis ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Huayan kere nke mbụ, nke na-eji ihe na-adịghị emerụ emerụ na akpịrị. . E jiri ya tụnyere ọdịnala acid-base hydrolysis nke collagen, usoro enzymatic hydrolysis nke ụlọ ọrụ anyị nwere ọtụtụ uru: Nke mbụ, n'ihi na enzymatic hydrolysis ọnọdụ na-adịkarị nwayọọ, a gaghị enwe mgbanwe na ngwongwo molecule na enweghị mmebi nke ihe arụ ọrụ. Nke abuo, enzyme nwere ebe mmechi uzo, ya mere o nwere ike ijikwa ihe omimi nke hydrogenzed collagen ma nweta hydrolysates site na nkesa nke ihe omimi. Nke ato, n'ihi na anaghị eji acid na alkali eme ihe na usoro enzymatic hydrolysis, usoro enzymatic hydrolysis bụ ihe dị mma na gburugburu ebe obibi ma ghara imetọ gburugburu ebe obibi.
No.12 Meifeng Road, mei'an Science Na Technology New Town, Haikou National High-tech Mpaghara, Haikou City, Hainan Province, China.
Copyright - 2010-20220: All Rights echekwabara.